सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा हिजो(आइतबार) दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या १७ पुगेको छ । चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिका–९ सुकुटेमा शैलुङ्गेश्वर यातायात बा२ख ७२४५ नम्बरको बस...
आइफोन र आइप्याड अपडेट गर्नुभयो ? अन्यथा पेपरवैटमा बदलिनेछ !
एजेन्सी । अमेरिकन बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'एप्पल'ले पुराना आइफोन र आइप्याडहरुमा आज(आइतबार)सम्ममा पछिल्लो आइओएस सफ्टवेयर अपडेट नगरेमा इन्टरनेट कनेक्सन हुन नसक्ने जनाएको छ । यदि त्यसो भएमा तपाइको आइफोन/आइप्...
पूर्वसभामुख महराको थुनछेक बहस आज
काठमाडाैं । पूर्वसभामुख एवं सांसद कृष्णबहादुर महराकाे थुनछेक बहस आज(आइतबार) हुँदैछ । जबरजस्ती करणी उद्याेगमा मुद्दा खेपिरेहका उनले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका मुख्य न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको ...
छठ पर्व समापन
काठमाडौं । आस्थाको महापर्व छठपर्वअन्तर्गत व्रतालुहरूले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्वको समापन गरेका छन् । मूलविधि चतुर्थीदेखि शुरु भई षष्ठीका दिन बेलुकी अस्ताउन लागेको र सप्तमीका दिन उदाउँद...
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज(आइतबार) दिउँसो बस्दैछ । सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बस्ने बैठकले आसन्न उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको टुं...
दिल्लीमा वायु प्रदुषण अत्याधिक बढ्यो, पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा
एजेन्सी । भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदुषणको स्तर बढेपछि त्यहाँको सरकारले पब्लिक हेल्थ इमरजेन्सी घोषणा गरेको छ । केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले दिल्लीका सबै विद्यालय नोभेम्बर पाँच सम्मका लागि बन्द गर्ने घो...
कांग्रेसलाई बलियो हुन् नेता सिंहको आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । आज(शनिबार) राजधानीमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले कार्यकर्ता जिम्मेवार बने मात्र...
काठमाडौं । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार गर्न खोजेको र नमान्दा कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको बयान शुक्रबार सकिएको छ । आज बिहान १२ बजेबाट शुरु भए...
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा नेविसंघको नाराबाजी, बैठक प्रभावित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघले नाराबाजी गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक शुरु हुनु पूर्व नै नेविसंघका नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी गरे...
दिनदहाडै सांसदको निवासबाट नगद र गरगहना चोरी
काठमाडौं । काठमाडौंबाट दिनदहाडैं सांसदको कोठाबाट चोरी भएको छ । संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमको कोठाबाट नगद सहित गरगहना चोरी भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० देव...
काठमाडौं । बाग्लुङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । शुक्रबार विहान ३ बजेर ५१ मिनेट जाँदा बाग्लुङमा भूकम्प गएको हो । भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार अधिकारी चौरलाई केन्द्र...
काठमाडौं । लक्ष्मी माताको मूर्ति विसर्जन गर्नेक्रममा कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा उत्पन्न विवाद सहमतिमा टुंगिएको छ । विहिबार मूर्ति विसर्जनको क्रममा दुई समूहबीचको झडपले उग्र रुप लिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्या...
संसदले दियो राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोगको जाँच गर्ने अनुमति
एजेन्सी । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयको छानबिनलाई औपचारिकता दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसको मतलब राष्ट्रपति ट्रम्पको ...
पाकिस्तानी रेल आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुग्यो !
एजेन्सी । पाकिस्तानको कराँचीबाट रावलपिन्डीतर्फ जाँदै गरेको रेलमा आगो लाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तिमा ७४ पुगेको छ । बिहीबार भएको दुर्घटनामा आगोको ज्वाला कम्तिमा तीन वटा क्यारिएज सम्म फैलिएको थियो ।...
प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालबाट सिधै बालुवाटार फर्किए
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डिस्चार्ज भएका छन् । हिजो(बुधबार)देखि ग्राण्डी अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओली आज(बिहीबार) साँझ ८ बजे डिस्चार्ज भएका हुन् । बुधबार र बिहीबार गरेर दुई पटक म...
लप्सीफेदीमा बस दुर्घटना, तीनको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको लप्सीफेदी(नगरकोट नजीकैको क्षेत्र)मा बस दुर्घटना भएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा ५ ख ५०७० नम्बरको बस लप्सीफेदीमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु ...
महरा थुनामै रहने, थुनछेक बहस शुक्रबार मात्र
काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालयले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि दर्ता गराएको जबर्जस्ती करणी उद्योग अन्र्तगतको अभियोग पत्रबारे जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस नभएपछि उनी बिहीबार पनि थुनामै...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अस्पताल पुगेका छन । प्रधानमन्त्री ओली एकाएक विरामी भएपछि बुधबार ग्राण्डी अस्पतालमा भर...